Semalt: Ny tahiry tsara indrindra ho an'ny fikojakojana ny tranonkala
Moa ve ny Postgres manitsy ny lahatsoratra sinoa?
Ny sasany amin'ireo webmasters dia nametraka fanontaniana mikasika ny ifantohan'ny Postgres manoratra lahatsoratra Shinoa. Ny valin'io fanontaniana io dia lehibe eny - cheapest dedicated servers. Rehefa mamorona angon-drakitra, ny fampiharana sy ny mpamatsy anao dia singa roa izay tena manan-danja. Postgres dia tranonkala iray mitifitra izay miasa miaraka amin'ny fanohanan'ny Unicode. Eo amin'ny dingan'ny famoahana ny tahiry Postgres, diniho ny famaritana ny endriky ny UTF-8.
Postgres JSONB vs. Datafin'ny NoSQL
Ny NOSQL dia maimaim-poana sy mora ampiasaina tahirin-kevitra izay mitahiry data amin'ny endrika misokatra. Ohatra, raha manaisotra angona momba ny tsenam-bola ianao, dia mila mitandrina momba ny fomba fitehirizana ny angona ianao. Eto no misy ny olana. Ny data base NoSQL dia tsy ahitana fanamarinana rafitra momba ny rafitra. Raha tsy tadidinao io dingana io, dia miafara amin'ny famoahana angon-drakitra anaty format tsy azo havaozina ianao.
Postgres, etsy ankilany, ahafahan'ny mpamaham-bolongana sy ny mpivarotra hampiasa ny safidy momba ny fahamarinan-toerana. Postgres, fivarotana tranokala tranokala, angon-drakitra amin'ny rakitra binary. Io daty io dia manohana ny versione HSTORE sy JSON.
Postgres dia tahirin-dahatsoratra lehibe indrindra ampiasaina mba hitazonana tahiry be dia be azo amin'ny fiteny samihafa. Io tahirin-kevitra io dia natao ho an'ny fikarohana sy fanasokajiana vokatra. Postgres JSONB koa dia fantatra amin'ny fitantanana karazana fiteny toy ny Sinoa. Ny endri-pirahalahiana hafa ao amin'ny Postgres dia ahitana:
Famafàna ny data miaraka amin'ny fanohanan'ny olona tanteraka;
Fanandramana haingana ny fanivanana sy fikarohana asa;
Fikojakojana ny angona azo antoka avy amin'ny HTML tags;
Famerenana ny angon-drakitra avy amin'ny tranokala ary fametrahana izany amin'ny format azo vakina;
Nahoana no Postgres JSONB?
Ny tahirin-kevitra mahasoa dia tokony hanatsara ny endriky sy hamaritra ny angon-drakitra ho amin'ny angona isan-karazany amin'ny fotoana rehetra. Aza avela hisy ny faharetana sy ny faharetana eo amin'ny tetikasanao. Postgres dia mampiasa clusters avy amin'ny genetika mba handravana ny angon-drakitra ho amin'ny tahiry samihafa mba hahazoana fitadiavana mora.
Ny fitehirizana ny angon-drakitra dia tsy ny momba ny fotoana sy ny fotoana fiatrehana. Fanapahan-kevitra momba ny fanavaozana dia mandray izany. Ampiasao ireo clusters mba hamenana ireo sub-submissions ary manafoana ny fizotry ny firaketana mandra-pahavitanao ny data. Izany dia manampy ny mpanjifa mametraka daty samihafa atsy ho atsy.
Tsy mora ny nitodika ny singa iray iombonana. Amin'ny tranonkala Postgres web scraping, afaka manasitrana haingana zavatra iray ianao amin'ny fifehezana ny lohahevitra amin'ny andalana hafa ary mampifandray ilay rakitra amin'ny fampiasana fanalahidy vahiny iray hafa. Asehoy ny fanalahidin'ny vahiny mba hahazoana vokatra.
Mampifangaro ireo antotan-taratasy roa sy ireo rafitra latabatra nentim-paharazana ve ianao rehefa mitahiry rakitra be dia be? Tsy ilaina ny manahy mikasika izany. Avelao ny Postgres JSON B hanao ny asa ho anao. Amin'ny alàlan'ny tranonkala fandinganana tranonkala Postgres, tsy ilaina ny famerenana fanavaozana.